Home Ngwa kacha ere igwe mma Leelọ ịsa ahụ na ebe ịsa ahụ na elu a na-acha uhie uhie Towel Bar
Ihe No. 482109BGD
Emechara: Ire gld
O siri ike inweta ihe niile ziri ezi maka onye ahịa nke na-achọkarị ịga n'ụzọ dị iche. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ iji ihe iberibe meju ngwaahịa gị, gaa kpochapụwo. Kpochapụwo bụ kpochapụwo maka ihe kpatara, ma ọlị! Ogwe akwa a na-eji akwa igwe anaghị agba nchara dị mfe ịwụnye ọ ga-enye ọmarịcha oge ọhụụ ya na akụkụ ihu ya na-acha ọcha na profaịlụ dị sọọsọ. N'ime usoro onyonyo dị iche iche, gụnyere ọla edo na-agbaze agbaze, nke a ga-agbakwunye mmetụ ahụ na-adọrọ adọrọ dị elu na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla.
A ga-eji ya rụọ ngwa ngwa, akwa a na-eji akwa nhicha mgbidi a ga-abụ nke ọ bụla iji jide akwa nhicha ahụ, akwa ihu yana ọbụna akwa nhicha ahụ. Ebe ọ bụ na onye na-ere ahịa ọgbara ọhụrụ ga-enwekarị nhọrọ nke iweghachi ya ọzọ n'okporo ụzọ, nke a bụ nnukwu ọmarịcha atụmatụ iji nyere ha aka ịme nhọrọ dị mma. Mgbe ị na-eji ngwa, juju ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe gị, anyị kwenyere na ị tozuru oke mma maka ọnụahịa kachasị mma. A na-eji ngwa eji igwe anaghị agba mbọ wee rụpụta ihe dị elu dị elu iji mee ka ịdị mma na ogologo gị na ndị ahịa gị ga-atọ gị ụtọ.
• profaịlụ dị mkpụmkpụ ma dị jụụ maka obere ime ụlọ ịwụ ahụ pere mpe
• hanger dị elu na-akwụ ụgwọ ọnụ ahịa
• Mfe ịwụnye ma dịgidere maka iji ogologo oge
Next: Sleek na ọkaibe Matte Black Tissue Holder na shelf